‘पौडेलको आत्महत्याको कारण लोकलाज र प्रहरीको त्रास’ « Farakkon
‘पौडेलको आत्महत्याको कारण लोकलाज र प्रहरीको त्रास’
तुलसीपुर , बैशाख ८ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ का ४५ बर्षीय भेषकुमार पौडेलको मृत्युको खवर सोमवार एकाविहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हावाको बेगमा फैलियो । साथीहरुले उनको तस्विर राखेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखिरहेका थिए । स्वतन्त्र मजदुर संगठनका कर्मचारी समेत रहेका पौडेल आइतवार मध्य रातमा तुलसीपुर ५ स्थित सल्यान रोडको एक घरमा आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको कुरा प्रहरीले गर्यो । जो घर उनको हैन । प्रहरीका अनुसार पौडेल परस्त्रीको घरमा गएका थिए । पौडेल त्यहाँ गएको कुरा स्थानीयले थाहा पाए। हल्ला गरे । प्रहरीलाई पनि खवर गरे ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रबक्ता चक्रडम्मपर पालका अनुसार घटनास्थलमा प्रहरी आइतवार रातको ११ बजेतिर पुगेको थियो । स्थानीयले प्रहरीलाई रातको १० बजेतिर नै खवर गरेका थिए । निर्माणाधिन उक्त घर ती महिला आफ्नै थियो । त्यसमध्य एउटा कोठामा उनीहरु बसेका थिए । त्यहीे गएर प्रहरील ढोका खोल्न आग्रह गर्यो ।
प्रहरीले केही समय ढोका ढकढकाएपछि बल्ल ढोका खुल्यो । महिला मात्रै ढोका खोलेर बाहिर निस्किइन । उनी र प्रहरीका बीचमा कुरा हुँदै थियो । प्रहरी निरिक्षक पालका अनुसार त्यतिबेला कोठाभित्रै बसेका पौडेलले भित्रवाट आफै ढोका लगाए । प्रहरी र ३४–३५ बर्षीया ती महिलाका बीचमा कुरा हुँदैगर्दा पौडेल भित्र झुण्डि सकेका रहेछन् ! प्रहरी र ती महिलाले जति ढोका खोल्न आग्रह गर्दापनि ढोका खुलेन । प्रहरी निरिक्षक पालका अनुसार त्यसपछि झ्यालवाट नियाल्दा पौडेल झुण्डिएको अवस्थामा देखिए ।
‘त्यतिगर्दा सम्म रातको १२ बजिसकेको हुँदो हो,’ प्रहरी निरिक्षक पालले भने ‘त्यसपछि मध्यरातमा केही गर्न नमिल्ने हुँदा हामी ती महिलालाई नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय फर्कियौं।’प्रहरीका अनुसार सोमवार विहानै प्रहरी फेरि घटनास्थल पुग्यो । ढोका फोडेर मुचुल्का बनाएर पौडेलको शव निकालियो । पोष्ट मार्टमको लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीुपरमा पुर्इयो । प्रहरीकै बयानका आधारमा पनि पौडेलले आत्महत्या गर्नुको प्रमुख कारण लोकलाज र प्रहरीको त्रासलाई मान्न सकिने एक अधिकारकर्मीले तर्क गरेका छन् ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय महासचिव सुशील बस्नेतले प्रहरीले जति आवश्यक साबधानी अपनाउनु पर्ने थियो त्यो नदेखिएको बताए । ‘प्रहरी कुनै ठाउँमा पुग्नुको कारण गलत काम रोक्नको लागि हो वा सुरक्षाको लागि हो,’ महासचिव बस्नेतले थपे ‘प्रहरी गइसकेपछि त्यहाँ गलत काम भइरहेको थियो भने दुबैलाई सावधानी पूर्वक नियन्त्रणमा लिन सक्नु पथ्र्याे।’उनले पौडेलले एकाएक आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति के कसरी उत्पन्न हुन गयो ? भन्ने सवाल गहन रुपमा अध्यन हुनुपर्ने बताए ।
‘प्रहरी प्रशिक्षित हुन्छन्, तालिम प्राप्त हुन्छन् भनेरै प्रहरी यस्ता घटनामा खटाइन्छन्,’ बस्नेतले प्रश्न गरे ‘अन्यथा समुदायकै युवाहरु पनि यस्ता घटनाहरुमा गए भइहाल्थ्यो नि, हैन र ?’ तर उनले कसैका क्रियाकलापले समुदायलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारेको खण्डमा प्रहरीको उपस्थितिलाई अन्यथा मान्न नहुने धारणा पनि राखे । अर्की एक अधिकारकर्मीले मध्यरातमा प्रहरी कसैको घरको ढोका ढकढक्याउन जानुपूर्व नै संभावित जोखिमको नजरअन्दाज गर्न नसक्नुको परिनाम यो घटना घटेको बताइन ।